Izinketho ezintsha kokuthandwayo kwe-MacOS Sierra Finder | Ngivela kwa-mac
UJavier Porcar | | macOS Sierra, Izifundiswa
Eminyakeni edlule, abathuthukisi basebenzise ithuba lokuntuleka kwezinketho ukuletha emakethe i-"vitaminized" Finder engahlangabezana nokulindelwe ngabasebenzisi bokulawulwa kwamafayela abanzima kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi uhlelo lwe-Apple lunesikhali esiyimfihlo, ukuqaliswa kwe I-Automator ukugcwalisa ukushiyeka okuningi kwe-Finder. Kepha kunoma yikuphi, ikakhulukazi kubasebenzisi abangaqeqeshiwe kangako noma abafuna kuphela izinketho eziyisisekelo, I-Apple inquma ukufaka imisebenzi emisha ku-Finder ku-MacOS Sierra . Lezi yizinto zayo ezintsha ezimbili.
Susa izinto kudoti ngemuva kwezinsuku ezingama-30: Kuze kube yiMac OS Sierra azikho izindlela zokususa izinto kudoti njalo futhi sihlala sisesimweni sokususa imininingwane ngokushesha ukuze inganqwabeli noma ishiye okungenani isikhashana uma kungenzeka yisebenzise futhi. Kulungile lo msebenzi shintsha ukususwa kwefayela lapho zihlala ngaphezulu kwezinsuku ezingama-30. Lo msebenzi siwubona kwezinye izinhlelo zokusebenza, njengokukhishwa kwezithombe kuhlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Mac ne-IOS.
Gcina amafolda phezulu lapho uhlela ngegama: Lapho sifuna ukuthola ifayili, ngaphandle kokuthi sazi kahle ukuthi sifuna ukuthola ini, kuyinto ejwayelekile ukuqala ngento ejwayelekile, ukuqhubeka nokusesha ngaphakathi kwabo nokufinyelela kulwazi oludingekayo. Isibonelo, ngifuna ukuthola i-invoyisi yomcimbi. Sivame ukusesha ngesinqamuleli sekhibhodi se-Alt + Cmd + bese sisesha ngegama lomcimbi. Kuze kube manje, lolu lwazi lulethwa ngamafolda namafayela ahlanganisayo. Ngokuhlola le nketho entsha, sizobona amafolda angenhla (okungukuthi, okokuqala) bese lonke olunye ulwazi.
Ekuqaleni le misebenzi ifihliwe ngandlela thile. Ukuyenza isebenze, kufanele sifinyelele kokuncamelayo kwe-Finder bese ucindezela okuthuthukile, lapho singazisebenzisa khona.
Le misebenzi efihliwe kancane iyaqhubeka nokugcwala uhlu lwezinketho ezintsha eziyi-100 noma ezingama-200 esimenyezelwe zona ngokukhishwa kohlelo ngalunye lokusebenza, sizobona ukuthi zingaki ezingakatholakali eMacOS Sierra.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Izinketho ezintsha ku-MacOS Sierra Finder
UFran Molina kusho
Ngabe zonke izandiso zingafihlwa ngasikhathi sinye, noma sizoqhubeka ngo-1985?
Phendula uFran Molina
Isikhathi sokuvuselela i-iPad yakho? Yikuphi ongakhetha kukho?